၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်လူအစုအဝေး၏ဥာဏ်ပညာလော။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 18, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
“ Wisdom of the Crowds” သည်ဤမှော်ဆန်သောဝဘ် 2.0 နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သင်က Google ဟူသောဝေါဟာရကိုရလျှင်ရလဒ် ၁.၂ သန်းခန့်ရှိသည် ဝီကီပီးဒီးယား, အရောင်တမှိတ်, အလုပ်မှာ Mavericks, Starfish နှင့်ပင့်ကူ, Wikinomics, etc
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရငါလည်းမယုံဘူး ငါကစာရင်းဇယားတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ အင်တာနက်သည်အီးမေးလ်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၊ ဘလော့များ၊ ဝီကီများနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့အားစကားလုံးကိုထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သန်းပေါင်းများစွာ၏ဉာဏ်ပညာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဖော်ဆောင်နိုင်ပါ။ သင်သန်းပေါင်းများစွာရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပါးနပ်သောလူများထံသို့ယူဆောင်လာသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁ သန်းထီကိုအနိုင်ယူလျှင် ၆.၅ သန်းတွင် ၁ ဖြစ်လျှင်ငါလက်မှတ် ၆.၅ သန်းကိုဝယ်။ အနိုင်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ၁ ချပ်ဖြင့်သာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လက်မှတ်ပေါင်း ၆.၅ သန်းကို ၀ ယ်တာဟာပညာရှိရာမကျဘူး။ ဒီသဘောတူညီချက်မှာဒေါ်လာ ၅.၅ သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ဘူးလေ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေခြင်းသည်သန်းပေါင်းများစွာမကုန်ကျပါ - တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခမဲ့သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဆင့်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ရှိမှတ်ချက်များဆင်တူဖြစ်ကြောင်း ... သူတို့ပို့စ်မှစိတ်ကူးအချက်များထည့်ပါ။ မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ သူတို့ကဆွေးနွေးမှုကိုရွေ့လျားစေပြီးငါကြိုးစားနေသည့်အထိထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်သောလူ ၁၀၀ လျှင် ၁ ယောက်မှ ၂ ယောက်သာမှတ်ချက်ရေးသည်။ ဒါကအခြားစာဖတ်သူတွေဟာတောက်ပတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ လူအစုအဝေး၏ပညာ ငါ၏အအကြောင်းအရာကိုလေးစားမှုနှင့်အတူသာအနည်းငယ်စာဖတ်သူများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်ဒီစာဖတ်သူအနည်းငယ်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကမဟုတ်ပါဘူး လူအစုအဝေး၏ပညာအဲဒါတကယ်ပဲ လူအစုအဝေးရောက်ရှိခြင်း၏ဉာဏ်ပညာ.
မတ်လ 18, 2007 မှာ 9: 53 pm တွင်
၎င်းသည်လေလံပွဲတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်မှာနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုနောက်ဆုံးပေါ်လေလံများဖြင့်မြင့်တက်စေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်ကိုနောက်ဆက်တွဲတွေးခေါ်သူများကမောင်းထုတ်သည် -“ သံသည်သံကိုထက်စေသကဲ့သို့လူတစ် ဦး သည်အခြားတစ် ဦး ၏ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သည်။ ” (သု။ ၂၇:၁၇)
မတ်လ 18, 2007 မှာ 10: 41 pm တွင်
ဒါကငါမစဉ်းစားမိသောဤအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကဲ့သို့ကောင်းစွာစကားပုံကိုကိုးကားကိုချစ်၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရစ္စတင်း!
မတ်လ 19, 2007 မှာ 12: 47 pm တွင်
မတ်လ 19, 2007 မှာ 6: 36 pm တွင်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင့်ဆိုဒ်မှထွက်ခွာပြီးနောက်ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာနှင့်အခြားဘလော့ဂ်တစ်ခု၏ထင်မြင်ချက်စာမျက်နှာဘလော့ဂ်သို့ကျွန်ုပ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သောပြissuesနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိုဆွေးနွေးမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပါ။ ငါသူတို့မကြာခဏအခြားလမ်းကိုသွားပြောပါလိမ့်မယ်။